” Soomaaliya Haddii Ay Sharciga Garaneyso, Dhakhaatirta Kama Aysan Jeex-jeexdeen Boosaboorka ” Dr Adna Aadan | Gaaroodi News
” Soomaaliya Haddii Ay Sharciga Garaneyso, Dhakhaatirta Kama Aysan Jeex-jeexdeen Boosaboorka ” Dr Adna Aadan
July 15, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Sida baraha bulshada lagu baahiyay, garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa lagu xiray laba dhakhtar oo ka howlgaleysay isbitaalka Dr. Adna Aadan ee magaalada Hargeysa.
Dhakhaatiirta waxay ka yimaadeen Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland, waxayna u safrayeen dalka kenya, balse diyaaraddii ay la socdeen ayaa soo marisay magaalada Muqdisho.
Dhakhaatiirtaan waxay ku safrayeen baasaboorka Somaliland. Waxay sheegeen in “looga jeex-jeexay garoonka Muqdisho, dibna loogu celiyey magaalada Hargeysa.”
Adna Aadan oo madax ka ah Isbitaalkii ay ka howl-gelayeen dhakhaatiirtaan oo dhacdada ka dib saxaafadda kula hadashay Hargeysa waxay tiri:: “Muddo seddax maalmood ah ayay dhakhaatiirtaan Muqdisho ku xirnaayeen ka dibna, waxaa dib loogu soo celiyey magaalada Hargeysa.”
Waxay arrintaas ku tilmaantay in ay tahay aqoon darro dhanka sharciga ah oo Soomaaliya ka jirta, sida ay hadalka u dhigtay.
“Waxaa si caafmaad ah Alle noogu soo celiyey saraakiishii caafimaadka ee Xamar lagu afduubtay. Sharci ayey ku dhoofeen oo baasaboorka Somaliland ayey wateen. Dal ku galka waddankii ay u socdaan ayaa loogu soo dhuftay. Waxay taransid ku ahaayeen garoonka Muqdisho,.”
“Sharciga aduunka u degan waxa uu dhigayaa in dadka taransidka ku ah dalka aan la dhibaateyn. Dalka ay u socdaan ayaa u ogolaada in ay ka degaan ama u diida. Dalka ay sii marayaan shaqo kuma lahan waxa ay ku dhoofayaan, waa xeer aduunka u degan,” ayey tiri Adna Aadan oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa. Adna Aadan, markii ay saxaafadda la hadlaysay waxaa garab taagnaa qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalkeeda Hargeysa
Dowladda Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin eeddaas loo soo jeediyay. Waaxda socdaalka Soomaaliya oo aan isku deynay in aan la xiriirno weli wax jawaab ah kama aynaan helin.
Adna Aadan ayaa sidoo kale tiri, “Hadii Soomaaliya ay garaneyso sharciga, dad taransid ah baasaboor kama aysan qaadeen, kamana jeex-jeexdeen, seddax maalmoodna afduub kuma heysateen. Haddii sharciga aduunka ay garanayaan intaas ma sameeyeen.”
Adna Adan ayaa sheegtay in dhakhaatiirtaan ay nabad qabaan, isla markaana ay goor dhow heli doonaan baasabooradii laga jeex-jeexay iyo tababarkii caafimaad ee dowladda Soomaaliya ay dhaafisay.
Waxay dowladda Soomaaliya ku dhaliishay in dhakhaatiirta ay “sidaan u gashay ay Hargeysa ku daweeyaan dad ay u badan yihiin kuwo Muqdisho ka soo doonta daryeel caafimaad.”
“Maalin kasta dadka ay daweeyaan Xamar ayey ka yimaadaan; Garowe ayey ka yimaadaan oo Boosaaso ayey ka yimaadaan; qaar ka mid ah madaxda Soomaaliya ayaa la socotay diyaaradii ay maanta ka soo degeen dhakhaatiirtaan, mana jirto cid dhib u geysatay, baasaboorna lagama jeex-jeexin sababtoo ah magan ayey noo yihiin,” ayay sheegtay.
Adna Aadan iyo dhakhaatiirta qaar ee ka howlgala isbitaalkeeda Hargeysa ayaa tagay garoonka diyaaradaha ee Cigaal, si ay u soo dhoweeyaan dhakhaatiirta.
In kastoo ay garab taagnaayeen markii ay saxaafadda la hadlaysay, haddana dhakhaatiirtan ma aysan hadlin